Dhammaan waxa ku soo dhaca Netflix toddobaadkan iyo waxa ka baxa oo dhan (Agoosto 11 toddobaad) - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Wax kasta oo u yimaada Netflix toddobaadkan iyo dhammaan wixii ka taga (Asbuuca 11 toddobaad) - BGR
Dhammaan wixii ku soo dhaca Netflix toddobaadkan iyo waxa ka baxa oo dhan (Agoosto 11 toddobaad) - BGR
Toddobaad kale, taxane kale oo asal ah oo Netflix ah. Mindhunter ayaa dib ugu soo laabtay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee dillada naxdinta leh iyo wadahadalada soo socda, halka xilli-ciyaareedkii ugu horreeyayba uu kor u kacayo, laakiin uu dhammaanayo oo uu dhagaystayaasha uga farxo xaalad kacsanaan leh oo qalqal gelineysa qof walba oo riyooda.
Xilligi lixaad ee 100 The anime Cannon Busters iyo filim cusub Martiqaad Sim xaq u leedahay Gal Florpus-ka kaas oo keenaya nolosha mid ka mid ah astaamaha hiddaha dhaqan ee qarnigii hore ee 2000. Nasiib darrose, annaguna waanu khasaaraynaa Dal majiro kuwii hore Toddobaadkan sidoo kale, marka hubi inaad hesho waqti aad ku daawato ka hor intuusan baaba'aan.
Waa tan liiska buuxa ee imaatinka Netflix ee soogalootiga iyo ambabbaxa usbuuca 4 Agoosto 2019:
Talaado 13 Agoosto
Arbacada 14 Agoosto
Khamiista Agoosto 15
Jimce, Agoosto 16
Sabti 17 Agoosto
Axad 11 Agoosto
Khamiista 15 Agoosto
Dagaalkii Labaad ee Adduunka: 1942 iyo Hitler ee jilicsanaanta jilicsan: 1 xilli
Waxaan ku soo laaban doonnaa isbuuca soo socda dulmar guud oo ku saabsan dhammaan bandhigyada, filimada iyo takhasusyada laga soo bilaabo iyo illaa Netflix. Dhanka kale, hubi wax kasta oo yimaada oo ka baxa Netflix bisha Agoosto sidoo kale jadwalka taariikhda siideynta oo dhan ee filimada Netflix ee asalka ah iyo taxanaha .
MINDHUNTER Source Source: Netflix
Qoyska Addams, Honey Boy iyo inbadan - BGR
Marvel wuxuu shaaca ka qaaday sida masiirka naxdinta leh ee Iron Man looga go’aansaday 'Avengers: Endgame' - BGR